eHimalayatimes | मनोरंजन | प्रज्ञा कुञ्जमा नाटक सप्ताह
19th January | 2019 | Saturday | 3:42:35 PM
प्रज्ञा कुञ्जमा नाटक सप्ताह
POSTED ON : Sunday, 13 May, 2018 (6:56:07 PM)
काठमाडौं । प्रज्ञा कुञ्ज स्कुलमा वैशाख २८ गतेदेखी नाटक सप्ताह भइरहेको छ । कक्षा चार देखी नौ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरुले भाग लिने उक्त नाटक सप्ताह वैशाख ३१ गतेसम्म विद्यालयकै प्रेक्षालयमा चल्ने छ । यस सप्ताहका प्रमुख अतिथी अनुप बराल हुन् ।
कक्षा चारले भोला र पहेंलो बस नाटक मञ्चन गर्ने छ । कक्षा पाँचले उज्यालोतिर र रोल नं. ४ मञ्चन गर्ने छ । कक्षा ६ ले चार्ली एन्ड द चक्लेट फ्याक्ट्री र हिराको भोटो, त्यस्तै कक्षा ७ ले ब्युटी ईज अ बिस्ट, कक्षा आठले मधुमालतीको कथा र कक्षा नौ ले किताबभित्र किताबबाहिर मञ्चन गर्ने छन् । भोला, पहेंलो बस, रोल नं. चार, उज्यालोतिर, हिराको भोटो, किताबभित्र किताबबाहिरलाई टंक चौलागाँईले लेखन, निर्देशन गरेका हुन् । रमेश विकलको कथा मधुमालतीको कथालाई नाट्य रुपान्तरण, अग्रेजी नाटक चार्ली एन्ड द चक्लेट फ्याक्ट्री र ब्युटी ईज अ बिस्टलाई टंक चौलागाँईले निर्देशन गरेका हुन् ।
छ वर्षदेखी निरन्तर थिएटरमा नाटक मञ्चन गरिरहेको प्रज्ञा कुञ्ज स्कुलले अघिल्लो वर्ष मोबाईल थिएटरको आयोजना गरेको थियो । यो नाटक सप्ताह त्यसैको निरन्तरता हो ।हरेक नाटक दुई शो मञ्चन हुनेछन् । विद्यालयका करिब तिन सय विद्यार्थीले अभिनय गरेका छन् ।
उद्घाटनको दिन नाटक भोला र पहेंलो बसको मञ्चन भयो । एकजना सज्जन मानिसले टुहुरो बालकलाई पढ्नको लागि सहयोग जुटाउन गरेको संघर्षको कथा नाटक भोलाले भनेको थियो । हाँस्य रसमा प्रस्तुत गरिएको यो नाटकको कथा वियोगान्तमा टुँगिन्छ । केही दर्शकहरु भावुक भएर आँखाभरी आँशु बनाएका थिए ।
भुकम्पपछि गाउँबाट काम गर्न सहर ल्याईएकी केटीको कथा पहेंलो बसले भनेको थियो । उसलाई पढ्ने रहर छ । साउको घरमा काम गरेर फुर्सद छैन । साउको छोराछोरीलाई स्कुल बसमा पुर्याउन जाँदा देख्ने पहेंलो बस उसलाई खुब मन पर्छ र त्यही बस चढेर स्कुल जाने सपना साँचेकी छे ।
दुबै नाटक कक्षा चारका विद्यार्थीहरुले अभिनय गरेका हुन् भने लेखन निर्देशन टंक चौलागाँईको हो ।
महोत्सवको दोश्रो दिन कक्षा ५ ले उज्यालेतिर र रोल नं. चार कक्षा आठले मधुमालतीको कथा र मञ्चन गर्याे ।
राजकुमार सिद्धार्थ कसरी गौतम बुद्ध कहलिए भन्ने कथा उज्यालोतिरमा देखाईएको थियो । एउटा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले बिहान दश बजेसम्म सडक बढार्ने काम गरेर पनि ऊ स्कुलमा रोल नं. ४ हुन्छ । यसको लागि उसले कत्ति मिहिनेत गर्नु पर्ला ?यो कथा रोल नं.न चारको हो ।
महोत्सवको तेश्रो दिन किताबभित्र किताबबाहिर र ब्युती ईज अ बिस्ट मञ्चन हुँदैछ भने अन्तिम दिन हिराको भोटो र चार्ली एन्ड द चकलेट फ्याक्ट्री मञ्चन हुँनेछ । सबै नाटक टंक चौलागाँईले निर्देशन गरेका हुन् ।